Suuqa kala iibsiga Yurub ee bishii Janaayo ayaa si rasmi ah loo furay horaantii bishii Janaayo 2021 markaas oo kooxaha ay doonayaan inay hirgeliyaan qorshayaashooda ka hor intaadan la wareegin.
Afarta xiddig ee Liverpool u horseeday guuldarada
Maxaa ku qornaa diyaaradda fariinteeda
Kooxaha yurub ayaa isku dayi doona inay sameeyaan dhaq dhaqaaq sida ugu macquulsan suuqa jiilaalka iyagoo og inaysan u weyneyn sida suuqa xagaaga oo ay adag tahay in saxiixyo waaweyn la sameeyo bartamaha xilli ciyaareedka.
Intaas waxaa sii dheer, kooxaha Yurub waxay isku dayayaan inay sii xaddidaan saameynta dhaqaale ee infekshanka coronavirus uu ku yeesho kooxahan.
Laakiin sidaan halkan ku baranay, waxaan idinla wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa iyo xanta suuqa dhexdiisa wargeysyada waaweyn ee yurub jimcaha.
Kooxda Leicester City ayaa hakisay saxiixa laacibka khadka dhexe ee kooxda Inter Milan Christian Eriksen kaas oo heshiiskiisu yahay 300 300 000 usbuucii. (Telegraph – rukhsad ayaa loo baahan yahay)
Bayern Munich ayaa si rasmi ah u shaacisay inay la soo saxiixatay daafaca dhexe ee kooxda RB Leipzig Dayot Upamecano oo ay kula soo wareegtay heshiis 42 42 milyan ah. (Mirror)
Manchester United, Manchester City iyo Chelsea ayaa dhamaantood muujiyey xiisaha ay u qabaan Upamecano, kaasoo qandaraaskiisa kaliya la aqbali karo bisha Janaayo. (Hadaf)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Tottenham Dele Alli ayaa ka codsaday gudoomiyaha kooxda Daniel Levy inuusan joojin amaahda uu ku joogo kooxda PSG. (90 daqiiqo)
Arsenal ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato daafac bidix si ay u dhameystirto Kieran Tierney ka hor dhamaadka bisha Janaayo. (Degdeg)
Inkastoo ay xiiseynayaan kooxo kale, 22 jirka khadka dhexe ee Real Madrid Martin Odegaard ayaa ku dhow inuu ku biiro Arsenal. (Isboortiga – Isbaanish)
West Ham ayaa soo afjartay xiisihii ay u qabtay saxiixa weeraryahanka Sevilla Youssef En-Nesyri, oo 23 jir ah, ka dib markii laga soo diiday 27 27m dalab, Sevilla ayaa soo gudbisay 35 35m dalab. (Talksport)
West Ham waxay kaliya hoos u dhigi kartaa qiimaha 22-jirka qadka dhexe Declan Rice ilaa 50-50 milyan sababo la xiriira saameynta cudurka Korona Virus. (90 daqiiqo)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Independente del Valle Moises Caicedo, oo 19 jir ah, ayaa la filayaa inuu u duulo England jimcaha si 4.5 4.5 milyan ugu dhaqaaqo Brighton. (Sky Sports)
Maamulaha kooxda Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge ayaa sheegay in aysan jirin fursad lagu iibiyo 25 jirka Leroy Sane inkasta oo uu aad u yaryahay waqtiga uu ciyaarayo tan iyo markii uu ku soo biiray Manchester City (Manchester Evening News)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee kooxda Manchester City Yaya Toure ayaa xirfadiisa tababarenimo ka bilaabi doona kooxda reer Ukraine ee Olympic Donetsk. (ESPN)
Manchester United ayaa qarka u saaran inay la soo saxiixato weeraryahanka Palmeiras Gabriel Veron, 18, oo qandaraaskiisa lagu burburin karo 53 53m (Sport, via FourFourTwo)
Marseille ayaa la soo saxiixatay 26 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Napoli ee Milik kaas oo ay kula soo wareegtay heshiis amaah hal sano ah oo uu ku qaatay Mil 8 milyan oo lagu daray 4 4 milyan.
Chelsea waa inay sugtaa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan haddii ay doonayaan 33 jirka RB Leipzig macalinkiisa Julian Nagelsmann. (Sky Sports)
Kenya, Algeria waxay codsadeen in loo kordhiyo waqtiga howlgalka AMISOM – Axadle Radio